घर फुटबल EXTRAS क्लासिक फुटबलरहरू इयान राइट बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य
LB ले एक फुटबल लीजेन्डको पूर्ण कथा प्रस्तुत गर्दछ जो उपनाम द्वारा सबैभन्दा परिचित छ "क्रोध“। हाम्रो इयान राइट चाइल्डहुड स्टोरी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्यहरू तपाईंको बाल्यकालको समयदेखि आजको दिनसम्म तपाईंलाई उल्लेखनीय घटनाहरूको पूर्ण खातामा ल्याउँदछ। विश्लेषणमा उसको प्रारम्भिक जीवन, पारिवारिक पृष्ठभूमि, प्रख्यात हुनु भन्दा पहिलेको जीवन कहानी, प्रख्यात कथामा वृद्धि, सम्बन्ध र व्यक्तिगत जीवन आदि शामिल छ।
हो, सबैलाई थाहा छ उहाँ आर्सेनलको सबै समयका सब भन्दा बढि स्कोरहरू मध्ये एक हुनुहुन्छ। यद्यपि केवल थोरैले इयान राइटको जीवनी विचार गर्दछ जुन धेरै रोचक छ। अब थप विज्ञापन बिना, सुरु गरौं।
इयान राइट बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य- प्रारम्भिक जीवन र पारिवारिक पृष्ठभूमि
इयान एडवर्ड राइट 3rd दिन वा नोभेम्बर 1963 मा विलोविचमा लण्डन, इङ्गल्याण्डमा जन्मिएको थियो। उहाँ आफ्नो आमा नेस्सा र बुबा हर्बर्ट बीचको संघको जन्म भएको तीन केटाहरूको तेस्रो थियो।
राइटका अभिभावक आप्रवासीहरू थिए जसले आफ्नो जन्म हुनुभन्दा धेरै बर्ष पहिले इ England्ल्याण्डमा हरियो घाँसहरू खोज्न जमैका छोडे। त्यसकारण, राइट अफ्रिकी-अमेरिकी जराको कालो जातीयताको बेलायती नागरिक हो।
इयान राइट बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य- Runaway Father
युवा राइटले आफ्ना भाइहरू मौरिस र निकीलाई दक्षिण पूर्वी लन्डनको ब्रोकली र क्रोफन पार्कको साथसाथै सम्मान सम्मान ओक स्टेटमा सहभागी भए।
फुटबल अगुवाले केवल 18 महिना पुरानो थियो जब उनको बुबा परिवार छोड्यो, एक विकास जसले एक निर्दोष कदम पिता को दयालु राइटलाई छोडे जसले परिवारमा आफ्नो बाटो पाए।
"पिताजीले जब म 18 महिनाको बारेमा थियो भने छोडिदिनुभयो र मेरो सट्टाअड्डामा आउनुभयो, म लगभग 5,6भएको हुनुपर्दछ, जब मैले उनलाई सम्झन्छु र त्यो राम्रो फेल थिएन।"
उहाँले एक पटक सम्झनुभयो।
इयान राइट बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य- विवाहित बालबालिका
राइटले आफ्नो सौतेफेरको साथ राम्ररी प्राप्त गरेन र विशेष गरी एक विनाशकारी तरिकामा आत्मविश्वासको लागि घृणा गरिएको थियो।
"सबै भन्दा सानो केटा हुनु भएकोमा म भन्न चाहान्छु म खराब थियो तर म दु: ख थियो, म एक युवक देखि धेरै हटाइयो र धेरै विश्वस्त भयो र मान्छेले गलत बाटोलाई घुम्न थाल्यो। खास गरी मेरो सौतेदाद, उनले मलाई सबै ".
रिक राइट राइट।
नतिजाको रूपमा, जवानले उनीहरूको मनपर्ने टेलिभिजन स्पोर्ट्स शो देखेर प्रिय महोत्सवमा पहुँचलाई इन्कार गरे; म्याचको म्याच। लिजेंन्डको अनुसार:
"दिनको म्याच र फुटबल हेर्दै मैले सबैको लागि बाँचें। त्यो सुरू गर्नु अघि बेडरूममा आउनु भएको थियो र उसले भन्थ्यो, 'वरपर घुमाउनुहोस्। वरिपरि घुमाउनुहोस् '। हामीले भित्ता अनुहार गर्यौं कि पुरा समय दिनको म्याच सकियो। र वास्तवमा क्रूर कुरा यो थियो कि हामी अझै सबै कुरा सुन्न सक्छौं। यो भयानक थियो। मैले आफूले सुत्न सकिनँ। "
नतिजा, राइट एक जवान गुस्सा केटाको रूपमा जोस वर्ष पछि भयो, 14 शब्दहरुमा आफ्नो समस्याग्रस्त बचपन अनुभवको सारांश:
"मेरो जीवनको ठूलो भागको लागि, मलाई रिस थियो। मलाई सधैं रिस थियो "।
इयान राइट बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य- सकारात्मक प्रभाव
राइटको रीस उठेको बेला उहाँ स्कूलका शिक्षक लेट सिडनी पिडगेनद्वारा शान्त हुनुभयो। यो स्वर्गीय सिडनी हो जसले इयानलाई पढ्न र लेख्न सिकाउँथ्यो र अन्धकारपूर्ण समयमा पनि उनलाई मद्दत गर्थे।
"उहाँ पहिलो व्यक्ति हुनुहुन्छ जसले मलाई कुनै पनि प्रेम देखाउनुभयो। उहाँ अझै पनि मेरो साथ हुनुहुन्छ। उहाँ सधैं मेरो संग रहनुहुनेछ। "
आफ्ना विगतका शिक्षकको राइट्स राइट।
लेट सिड्नी (दायाँ) राइटको पहिलो सकारात्मक प्रभाव थियो।
फुटबलको लागि आफ्नो बिग्रिएको बचपन र प्रेमको बिट्स उठाउदै, राइटले 14 उमेरको उमेरमा फुटबल गर्ने निर्णय गरे तर धेरै क्लबहरूले खारेज गरे।
16 को उमेर मा स्कूल छोड़ने पछि, निरंतर जवान को आफु फुटबल मा आफ्नो विकल्प को विचार मा bricklaying र प्लास्टरिंग मा प्रशिक्षित गर्यो।
एक वर्ष पछि, राइट एक पेशेवर फुटबलर हुन नजिक नपुगेको थिएन र कानूनको साथ उनको पहिलो जीवन-परिवर्तन सम्बन्धी मुद्दा थियो, जसको कारण दुई हप्ताको लागि तिनको अपहरण।
"मेरो दुई कारहरू थिए तर कुनै कर वा बीमा थिएन। जब तिनीहरूले मेरो साथ पकड्यो तब मैले 14 दिनको लागि चेल्म्सफोर्डको जेल गए। बन्द गर्ने ती जेलहरूको आवाज र भित्र मस्तिष्कको आवाज मलाई सिकाइयो: म यो जीवनमा जीवन बिताउन सक्दैनु "।
इयान राइट बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य- प्रसिद्धि उठाउनुहोस्
भन्न पर्याप्त छ, यो "सेल अनुभव" हो जसले राइटलाई सफलताको लागि आवश्यक शट दियो। उहाँ सर्वप्रथम बर्मन्डेमा आधारित आइतवार लिग क्लब टेन-इम्-बीमा बस्नुभयो र त्यसपछि १ 1985 XNUMX मा अर्ध-व्यावसायिक ग्रीनविच बरोलाई प्रतिबद्ध गर्नुभयो।
यो ग्रीनविचमा भएको थियो जुन स्टारले बनाएको काममा प्रभावशाली प्रदर्शन प्रदर्शन गर्यो जसले 1985 मा क्रिस्टल पैलेससँग उनको पहिलो व्यावसायिक अनुबंध सुरक्षित गर्यो। क्रिस्टल महलको समयमा, राइट आफ्नो पहिलो सिजनमा प्रभावित भए र दोस्रो सेकेन्डमा क्रिस्टल महलको लागि एक सय गोल टाइटमा पुग्यो।
अन्य फिटहरू बीचको तीव्र उपलब्धिहरू राइट अन्तर्राष्ट्रिय सम्मान र रेकर्ड ट्रांसफरले 1991 मा आर्सेसनलाई ल्यायो। बाकि, जस्तै तिनीहरू भन्छन्, इतिहास हो।
इयान राइट बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य- सम्बन्ध जीवन
इयान राइट दुई पटक विवाहित भएको छ। हामी तपाईंलाई आफ्नो सम्बन्ध र वैवाहिक जीवनको बारेमा विवरण ल्याउँछौं।
पहिलो राइटको उसकी प्रेमिका शेरोनको साथको सम्बन्ध थियो। राइटले शारोनलाई यस्तो समयमा भेट्यो कि उनको पहिले नै शॉन भन्ने छोरा थियो। उनले शनलाई अपनाए र पछि उनको एक ब्राडली नामको बच्चा भयो।
शान र ब्राडले ठूलो फुटबल खेलाडी बनेका थिए जो दुवै न्यूयोर्क रेड बुल्सका लागि खेले।
ब्रैडली (बाँया) आफ्नो भाइ शॉन संग।
राइट मा घुमाउँदा उनको पहिलो पत्नी डेबराह भनिन्छ। अब अनुमानित जोडेहरू पहिले बस स्टपमा भेटिए र विवाह सम्म डेटिङ सुरु गरे।
उनीहरूको विवाह4बच्चाहरूको साथ आशीर्वाद थियो उनीहरूले ब्रेट, स्टेस्सी, बोबबी र कोको समावेश गर्दछ। राइट र डेबराह पछि तिनी भिट्रेट र बीबीसी शोधकर्तासँग धोका दिएपछि अलग भए।
फुटबल किंवदंती हालै आफ्नो दोस्रो पत्नी नैन्सीसँग विवाहित छन् र उनीहरूसँग दुई छोरी छन् लला र रोक्सन नाउँ।
युगलहरू एक ग्रुपद्वारा एक सशस्त्र लूटलाई बाँच्न लगायत धेरैको माध्यम ले रहेको छ जसमा नैन्सीले आफ्नो घरको छेउमा राखे।
राइट त्यतिबेला घरबाट टाढा थिए, जो 2014 फीफा विश्व कपको समयमा ब्राजिलमा एक पन्डितको रुपमा काम गरिरहेको थियो। सौभाग्य देखि, लुटपाट अपरेसन सञ्चालन गर्दा छिमेकीहरू आफ्नो छोरीहरू सहित कुनै पनि चोट लागेन।
इयान राइट बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य- कम ज्ञात क्यारियर तथ्यहरू
इयानले लेखे र उनको आत्मकथा "श्री राइट" प्रकाशित गरे तापनि उनी अझै पनि 1996 मा आर्सेनलका लागि खेलिरहेका थिए। आगो कहाँ छ?
उनलाई फुटबलबाट आफ्नो सेवानिवृत्तिको केही समयपछि एमबीई पुरस्कार दिइएको थियो।
कहिलेकाहीँ उनी आईटीवीले हस्ताक्षर गरे आफ्नो फेस शो "शुक्रबार नाइटको सबै राइट" प्रस्तुत गर्नका लागि, इयानले धेरै टिभी र रेडियो गग्स प्रस्तुत गरेको छ र साथसाथै कारोबारमा देखा परे।
इयान राइट बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य- व्यक्तिगत जीवन तथ्य
राइट एक फुटबल किंवदंती हो जुन एक pundit र पूर्व खेलाडी को रूप मा उनको एक्स्ट्रोव प्रकृति को लागि जानिन्छ। आफ्नो बहिष्कृत स्वभाव को रूप मा एक व्यक्ति छ जो उनको पहिलो 19 सालों को लागि उनको शुरुवात शुरुवात कार्ड जीवन को त्याग्छ र जीवन को हुनु पर्छ को लागी एक मिशन मा छ।
"अब हुनसक्छ कि तपाईंले मेरो कथा पढ्नुभएको छ, तपाईंले मलाई टेलिभिजनमा मुस्कुराउँदै टेलिभिजन हेर्नुहुनेछ र तपाईले वास्तवमा बुझ्नुहुनेछ कि म यो जन्मेको थिएन। मैले यो कमाएँ। "
उहाँले टिप्पणी गर्नुहुन्छ।
यो कथाले अन्य प्रयासहरू बीचमा, ब्याक र इच्छाहरूलाई प्रदान गर्ने काम गर्दछ जसले मानिसलाई फुटबलमा पहुँच पुर्याउँछ जसले पिच र बन्द दुवैलाई जोगाउँछ।
इयान राइट बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य- जीवन शैली
राइटले जीवनलाई भन्दा धेरै भन्दा कम अपेक्षा गर्न सक्दछ। आफ्नो पहिलो पत्नी डेबराह र उनको कर तलाकमा उनीहरूको महँगो तलाकको लागि धन्यबाद छैन जो फुटबल प्रयास गर्दछ।
"म लगातार ड्राइभर चालकहरू मलाई उठाउन आउँदैछु, हेर्दा म एक सामान्य ठाँउको घरमा बस्छु र यसो भन्छु, 'ब्लिम, यो जहाँ तपाईं कहाँ बस्नुहुन्छ? मैले ठूलो कुराको आशा गरेँ। '
उहाँले प्रकट गर्नुभयो।
जुनसुकै तरिकाले आशा झल्किन्छ, एक कुरा निरन्तर रहन्छ; राइट ले एक विकल्प खुसी बनाएको छ र साबित गर्दछ कि जीवन जस्तो जस्तो जस्तो जस्तो देखिन्छ जस्तो लाग्छ जस्तो लाग्छ।
इयान राइटको विनम्र घर।
तथ्य जाँच गर्नुहोस्: हाम्रो इयान राइट बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्यहरू पढ्नका लागि धन्यवाद। मा LifeBogger, हामी सटीकता र निष्पक्षताका लागि प्रयास गर्दछौं। यदि तपाईले केहि राम्रो देख्नुहुन्न भने, कृपया तल टिप्पणी गरेर हामीलाई साझेदारी गर्नुहोस्। हामी तपाईका विचारहरुलाई सँधै मूल्य दिन्छौं र सम्मान गर्छौं।
परिमार्जित मिति: नोभेम्बर 3, 2020